ISIS သည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည်ရှေးအီဂျစ်မှ Afrikhepri Fondation မှဖြစ်သည်
Aထာဝရပirreိညာဉ်တရားသစ်၏အစတွင်နာဇရက်အပျိုစင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ရှိသည်။ ဂျွန်ပေါလ် ၂း၁၉၈၈ Augustဂုတ် ၁၅ ရက်။ တမန်တော်ပေါလု Mulieris Dignitatem § ၁၁
ကျနော်တို့အချက်အလက်များရှင်းလင်းဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အခန်းကိုယခုလှည့်။ သငျသညျနားမလညျဖူးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့အထွတ်အမြတ်ကျမ်းမှပေါ်တွဲလွဲဆွဲထားရန်မလိုအပ်ရှိပါသည်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: အသိပညာ coded ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုသာကြီးစိုးအထက်တန်းလွှာအမှန်တရားသိတယ်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန် Pau II ကိုအားဖြင့်တမန်တော်အက္ခရာများ၏ထုတ်ယူ၏စာဖတ်ခြင်း, ရက်စွဲပါသြဂုတ်လ 15 1988 ဒီဂြိုဟ်ပေါ်ဖြစ်ခြင်းအဘို့အကြှနျုပျ၏အကြောင်းပြချက်အတည်ပြု။ ခရစ်တော်၏မွေးဖွားအဖြစ်မှန်ထို့ကြောင့်, သင့်မွေရာမှလုံးဝလွှဲဖို့ coded ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ multidimensional လမ်း, ထိုကဲ့သို့သောအဘို့အကြှနျုပျ၏သြတ္တပ္ပစိတ်ဖြစ်တယ်, ဒီဂြိုဟ်ပေါ်တွင်တစ်လောကလုံးခရစ်တော်၏သှနျးလောငျးများအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးလူ့ခန်ဓာကိုယျခန်ဓာ၌ငါ့ပုလ် polarity က၏ပြန်လည်မွေးဖွားအားဖြင့်ထင်ရှားခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်, သင် Nebadon ၏ဒေသခံဝဠာကို (အသက်တာ၏သခင်ဘုရားသည်) တွင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဖန်ဆင်းခြင်း7superuniverse ၏အဖြစ်မှန်နားလည်ရပေမည်။
ကျနော်တို့ Orvonton မခေါ်အထဲတွင်ရေချိုး။ Nebadon Neb-Adon သို့မဟုတ် matrix ဘာသာစကား "အသက်၏အရင်းအမြစ်" တွင်ဆိုလိုတယ် decomposes "အသက်တာ၏သခင်သည်။ " nmot "Adon" ၌, သင်ကလူ့မျိုးနွယ်၏မျိုးရိုးဗီဇ DNA ကို၏ဒြပ်ပေါင်းများကိုရှာပါ။ ကျနော်တို့မြင်ကြပြီအဖြစ်, သင်အသက်တာ၏ဒုတိယအနုမြူဗုံးစက်ဝိုင်းစပ်လျဉ်းသည့်သင်ယူခြင်းနယ်ပယ် "လူ့ဇာတိ" တွင်တည်ရှိသည်။ စိတ်ခံစားမှုခန္ဓာကိုယ်လူ့ဇာတိမှ reserved အသက်တာ၏နယ်ပယ်ကပိုင်ဆိုင်သည်။
Nebadonia ငါ့နာမကိုခရစ်တော်အားသို့မဟုတ်ဘဝ၏သခင်၏ဣတ္လက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်။ သင်ဖြစ်တည်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောလေယာဉ်ထဲမှာတုန်ခါ disembodied အများအပြားကောငျးကငျအပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းရှိကြောင်းတစ်ခု universal မိသားစုထံမှအားလုံးဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရပေမည်။ သင်ကနတ်မင်းကြီးလေယာဉ်ပေါ်ဤအကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်များအတွက်တစ်ပြိုင်နက်တည်ရှိခြင်း, တစ်လောကလုံးသည်ခရစ်တော်အားလုံး၏ရငျးမွစျကိုရည်ညွှန်းသောအလယ်ပိုင်းကျွန်းပရဒိသု၏ emanation ဖြစ်ပါတယ်။
Kabbalah မှာ, Tipheret, နေရောင်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်၏နယ်ပယ်နှင့်အတူဖော်ထုတ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆုံးမဲ့မှ extensions တွေကိုရှိသည်ကြောင့်သူဟာခမည်းတော်ထာသားတော်ကိုနှင့်ဝိညာဉ်တော်သည်အမေရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Urantia စာအုပ်အားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်ကမိုက်ကယ်၏လိုင်း "ကိုဖန်တီးခဲ့သူသူရဲ" ၏တစ်ဦးဖန်တီးမှုသားတော်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးအကြီးအဝဠာမွေးဖွားစင်တာ designates တစ်ဦးပရဒိသုသားတော်တစ်လောကလုံးဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ သင် "ဝင်ငွေ" လို့ခေါ်ထားဖို့လိုအဘယ်အရာကို "ပရဒိသု" အကြောင်းသင့်ရဲ့ဘာသာရေးဟောပြောပွဲ။ အမှန်မှာထို "ဝင်ငွေ" ကြိယာ Meri, မာရိထက်အခြားအဘယ်သူမျှဖြစ်သောဟီဘရူးအမြစ်ရှိ "Merit" ကနေ "ဘုရားသခငျ၏ချစ်သူတို့။ "
ဒါဟာလူသားအားလုံးပရဒိသု, အ impalpable နှင့် indefinable, Is ဒါကအားလုံး၏ရငျးမွစျထံမှလာသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဧဒင်ဥယျာဉ်စကားလုံးကိုလည်းလက်ဗွေ Edentia တစ်လောကလုံးဒေသဖြစ်ခဲ့သည်, သင်သည်ဤစာအုပ်၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။ ခရစျတျောမိုက်ကယ် / Raphael / Nebadonia ခရစ်တော်တည်းဟူသောစွမ်းအင်, စွမ်းအင်ခရစ်တော်-All-In (ပုံဆောင်ခဲ) ကြုံးဝငျပတျသကျ, အားလုံးဒါကများ၏စွမ်းအင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ KIRISTI "ardent သားနဲ့အသက်တာ၏သမီး" အသကျသံတမန်များ, matrix ကိုဘာသာစကား (Sumerian နျ -Akkadian) ဖြစ်ကြသည်။
KIRISTI ၏ဣတ္ရှုထောင့်တစ်ဦးသည်သန့်ရှင်းသော Matrix သို့မဟုတ်နတ်မင်းကြီးဗာဂျင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသအလိုက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တကျနေရောင်ကိုလည်းအပြာကြယ်ပွင့်အဖြစ်လူသိများကြယ်စနစ်က Sirius ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံး suns ဝဠာကိုဗဟိုကျွန်းပရဒိသုသှနျးလောငျးဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားသခသင်္ကေတဖြစ်သောကြောင့်သင်၏နေသည်အဲဂုတ္တုလူတို့က Ra လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ သင့်ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇအတွက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်လောင်စာဆီယိုစိမ့်။ အဆိုပါ Raphael ဘုရားသို့မဟုတ်Râ'af'Elဘုရားသခငျသညျအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေဆိုလိုသည်။
ra အတွက်တစ်လောကလုံးခရစ်တော်အားဆိုလိုသည်မှာ, (Imen-The-ဝှက်ထား) နေရောင်ဘုရားသင်္ကေတ။ မိမိအပုလ် polarity က Sa'am / Enki / EA / Osiris ခဲ့ Gina'abul (အမွငျ့ဆုံးသောဘုရား၏သား) incarnated ။ ထို့နောက်သူကခရစ်ယာန်နှင့်ကက်သလစ် Osiris ထက်အခြားအဘယ်သူမျှသောသူသညျယရှေု (Yehosua) နဲ့ရှုပ်ထွေးကြောင်း, ထိုနာမကိုအမှီ Heru (Horus) အရဗီဇခရစ်တော်အားဓာတ်ဆီမှပထမဦးဆုံးလူ့ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သင်သည်ငါ့ဒိုင်ယာရီတှငျမှတျတမျးတငျထားသတဲ့အလတ်စားတစ်ပိုက်အတည်ပြုလိမ့်မယ်အဖြစ် Nebadon အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု၏ဂျော့မိုက်ကယ်အမြဲ, ဒီဂြိုဟ်ပေါ်တွင်နေထိုင်ခဲ့တော်မူကြောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။ ခရစ်တော်အားအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုအမျိုးမျိုးသောဖာရောဘုရင်၏အသားအရေအတွက်အသက်အရွယ်မှတစ်ဆင့်နှင့် Judeo-ခရစ်ယာန်ခေတ်ကိုကျော်လွန်။ အကြှနျုပျ၏ပုလ် polarity ကဒီဂြိုဟ်ပေါ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ incarnated ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရှည်လျားမွကွေီးပျေါမှာ incarnated အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကြယ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ကြောင်း, ခရစ်တော်-စင်ကြယ်သော emanations ဖြစ်ကြသည်။ ငါသည်ခရစ်တော် Matrix တစ်ဦးလူ့ခန္ဓာကိုယ်၌ဤအစွမ်းထက်စွမ်းအင်ယောက်ျားကိုဘွားမြင်ပြီဖြစ်နိုင်သည် incarnate ။ အီဂျစ် Meri (ညျဘုရားသခငျ၏ချစ်သူတို့) မှရေးဆွဲကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးနာမကိုအမှီမာရိသည်သန့်ရှင်းသော Matrix သို့မဟုတ် Isis (Aset သို့မဟုတ် Egyptian) ကိုရည်ညွှန်းဖို့ esoteric နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ 9000 နှစ်ပေါင်းထက်အနည်းငယ်လျော့နည်းလည်းမရှိ, ငါ၏ဝမ်း၌မိမိစိတ်ဝိညာဉ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ဖို့ဘုရားသခင့မစ်ရှင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ့ကိုယ်ထဲမှာ Osiris ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း, ဆိုလိုသည်မှာယင်း triune ဝိညာဏ် (ငါ့အတက်) ငါ့ပြန်လာခရစ်တော်၏ပြန်သွားသင်္ကေတ။ မူရင်း Androgynous တက်ကျွန်ုပ်တို့၏ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို polarization ကိုပုတစ်လောကလုံးခရစ်တော်တည်းဟူသောဘဝ၏သခင်။
ဒီကလေးမွေးဖွားရာအရပျကိုယူသည်, ငါ့စွမ်းအင်သည်သူ၏ဆင်တူကြောင်းလိုအပ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ဤစကြဝဠာခမည်းတော်၏ပြောင်းပြန်ပုံရိပ်ဖြစ်၏။ ငါ "ဘုရားသခင်၏ချစ်ရာသခင်သည်" နှင့် "သညျဘုရားသခငျ၏မင်္ဂလာ, Bliss" ဆိုလိုသည်မှာက Universal မညျးတျော၏အမွှာလျှံဖြစ်၏။ အီဗိုလူးရှင်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဥပဒကြောင့်တိကျတဲ့ကိစ္စများတွင်, မွေးဖွားပေးသည်ခဲ့သူအမွှာလျှံကြောင်းဖော်ပြသည်။ Heru (Horus သို့မဟုတ်ဂရိ၌) ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ပထမဦးဆုံးလူသည်ဘုရားသခင်၏လူ့ခန်ဓာ (Uras) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ constellation Ursa ဗိုလ်မှူးတှငျမှေးဖှား Sa'am / Enki / Asar (Osiris) အပို-ကုန်းသဘာဝ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ခဲ့ကြသည်ကျနော်တို့မွကွေီးမစ်ရှင်အတွက်အစဉ်အမြဲအတူတူစွမ်းအင်ဖြစ်ကြသည်။ Osiris ငါ့အကို double ပုလ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် recompiled ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းတင်းကိုကြားပြောသော Judeo-ခရစ်ယာန်ဇာတ်, အဘယ်သူ၏မူလအစရောမပင်ဖြစ်သည်ယရှေု, ကလေးခေါ်လေ၏။ "ယေရှု" yazu အဆိုပါ Dogon အကြား, ဆိုလိုသည်မှာ venus (Neb-Heru), "ဟုအဆိုပါနံနက်ကြယ်ပွင့်" ကိုဆိုလိုသည်။ အင်တာနက်ကိုခုနှစ်တွင်, ဒါမှမဟုတ် yazu YASU Wiktionary မှ "လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်, သီလ, စေတနာ, မေတ္တာ, လူ core ကိုဆိုလိုသည်။ Yazu သို့မဟုတ်ယရှေုကမိမိအပေါင်းအဘော်တို့, ချစ်ခြင်း, သနားခြင်းကရုဏာစိတ်မှလူသားရဲ့ကြင်နာမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအပေါငျးတို့သသီလ၏အစုဖြစ်၏။ "
အမှန်မှာကျနော်တို့ 12 သီလ၏ကိုင်ဆောင်သူဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ "မာရိ၏ 12 ကြယ်များ" (ပု androgyne ၏ဣတ္ polarity က) သင့် DNA ကို strands ဖြစ်ကြသည်။ အားလုံးဤအချက်အလက်သည်သင်၏ကျမ်းစာ၌ encoded ဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှု၏နာမကိုအမှီအာရဗီဟေရှာသည်။ Heru ခရစ်စမတ်သင်္ကေတ "အလင်း၏ဘုရားသခင့ဆောင်လုလင်" ဆိုလိုတာကရှားအတွက် Phyrgie Attiéနှင့်မိသအတွက် Yshu (ဘိသိက်ခံသော) အီဂျစ်, ဟီဘရူး Yashua, Sumerian အတွက်တမ်မုဇ, ဂရိ Dionysus, အိန္ဒိယအတွက် Krishna ကဖြစ်ပါတယ် Sa'am / Enki / Osiris ထက်အခြားအဘယ်သူမျှဖြစ်သောဝိညာဉ်ရေးရာသည်အနာပျောက်စေသောသင်္ကေတ။
မာရိသညျဂဒလမာ Osiris ၏လူသတ်မှုအပြီး, အကြှနျုပျ၏ကိုယ်ပိုင်ထမြောက်ခြင်း၌ငါ့ကိုကူညီပေးဖို့တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့သည်အခြားနတ်မင်းကြီးဗာဂျင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် Ishtar / Nephthys, အမှန်တကယ်သူနာပြု Heru ခဲ့သောငါ၏စစ်မှန်သောအရိပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Nephthys Osiris / Heru နှင့်အတူမေတ္တာ၌ဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ငါသူသူနှင့်အတူအမျိုးအနွယ်ရှိခဲ့ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ကြပါဘူး။ တစ်ဦးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး torque လူ့ခန်ဓာအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မဟာမေတ္တာတော်နထေိုငျနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူတို့နှင့်အတူမတ်ေတာဝေမျှဖို့ဖြစ်တယ်။ အဲဂုတ်တုပွညျ၌အကြှနျုပျတို့၏မဟာမိတ်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်။ ငါသည်ငါ့သားသမီးလေးယောက် (အမွှာ) ၏အမည်များကိုမှတ်မိကြပါဘူး။ အီဂျစ်ပန်းချီကားများကိုမကြာခဏအထီးအမွှာပြသပါ။ ဘာသာပြန်များကိုမကြာခဏ Osiris ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းတော်အားဖြင့်, Ka (အလင်းခန္ဓာကိုယ်) ၏ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ။ သူတို့သည်ငါ၏အဖွဲ့ဝင်များ (ဘဝတစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်ခြင်း) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သောကြောင့်အကြှနျုပျ၏လက်ရှိဘဝမှာငါ့ကိုအမွှာဤနှစ်စုံ၏မွေးဖွားတိုင်းအခိုက်အထေူ၏။
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဂြိုဟ်ပေါ်တွင်တစ်လောကလုံးခရစ်တော်၏သှနျးလောငျးနှငျ့ပတျသကျ Urantia ၏ဘာစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်ဆင်းခြင်း၏ monotheistic အယူအဆအပေါ်အခြေခံပြီး, အက Universal သိစိတ်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ Urantia စာအုပ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏နတ်မင်းကြီးအဖြစ်မှန်နှင့် ပတ်သက်. အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များဖော်ပြထားခြင်း။ သငျသညျချီကာဂိုမှာကြီးပြင်းခြင်းနှင့် 1934 ထုတ်ဝေ 1955 သို့သည့်ဤစာအုပ်အတွင်းကျယ်ပြန့်ရှင်းလင်းချက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။
P.225 - §2အဆိုပါ Avon ပရဒိသုဝန်ဆောင်မှု၏သားများနှင့်ဒေသခံ University ၏တစ်ဦးချင်းစီဂြိုလ်ရန်ဖြစ်လျက်ရှိပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီ Avon သားတော်ကိုတစ်ခုသီးသန့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိပြီးရောနှောခြင်းမရှိနှစ်ခုရှိပါတယ်ကြောင့်, သူတို့၏တစ်ဦးချင်းစီအလုပ်ကိုသူတို့နေဖို့ရှိရာဘုံထဲမှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာမကြာခဏသေတတ်သောဇာတိပကတိ၏သဏ္ဍာန်ထဲမှာ incarnated နှင့်တစ်ခါတစ်ရံဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကမ္ဘာပေါ်မွကွေီးမိခင်များမှမွေးဖွားနေကြသည်။
P.225 - §63။ သိုမစ်ရှင်။ အမြိုးသားတို့ Avon အချို့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာရှိသမျှအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ဦးသေတတ်သောအပြေးပြိုင်ပွဲ effuse ပါလိမ့်မယ်။ တရားစီရင်ရေးလာရောက်လည်ပတ်သူ magisterial မစ်ရှင်အများကိန်းဖြစ်စေခြင်းငှါ, မြောက်မြားစွာရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အသီးအသီးဂြိုဟ်ပေါ်မှာကြဲသည်သားတော်ကိုရှိပုံပေါ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Avon effusion Nebadon ၏မိုက်ကယ် Urantia အပေါ် incarnated ခဲ့ပုံပေါ်မိန်းမမွေး။
P.368 - §1အဆိုပါ Infinite ဝိညာဉ်တော်သည်အချိန်နှင့်အာကာသ၏အားလုံး University ကဲ့သို့ပြံ့နှံ့ပေမယ့်နည်းပညာပိုင်းအားဖြင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏အရည်အသွေးများကိုလေးလည်းတစ်ဦးအထူးပြုအာရုံအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီဒေသခံဝဠာဌာနချုပ်လည်ပတ် ဖန်ဆင်းရှင်သည်သားတော်ကိုနှင့်အတူဖန်တီးမှု။ ဒေသခံတစ်ဦးစကွဝဠာနှင့်စပ်လျဉ်းတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်သားတျော၏အုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်အာဏာအထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောဖြစ်၏ ဿုံညှိနှိုင်းသော်လည်း Infinite သောဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားသခင့ဝန်ကြီးအဖြစ်, အကုန်အစင်သမဝါယမဖြစ်ပါတယ်။
P.368 - Nebadon ၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်မိုက်ကယ်၏ဆက်စပ် Salvington ဝဠာ§2မိခင်ဝိညာဉ်တော်သည်, အဓိပတိဝိညာဉ်၏ဆဌမအုပ်စုပိုင်နှင့်အရေအတွက်ကအမိန့် 611.121 သမုတ်သော။ သူမသည်သူပရဒိသုတာဝန်ဝတ္တရားကနေဖြန့်ချိသောအခါမိုက်ကယ်အတူလိုက်ပါဖို့စေတနာ့ဝန်ထမ်း; ထိုအချိန်မှစ. သူကအမြဲဝဠာ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အစိုးရသခင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။
P.368 - §3အဆိုပါမာစတာဖန်ဆင်းရှင်သားတော်ကိုသည်သူ၏စကွဝဠာ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါငျးတို့သအသေးစိတ်ကိုထဲမှာ, ဠာ၏မိခင်ဝိညာဉ်တော်သည်သားတော်နှင့်အတူ codirector ဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်သောဝိညာဉ်တော်အစဉ်အဆက်အချုပ်အခြာအာဏာနှင့်ဦးခေါင်းအဖြစ်သားတော်ကိုဝန်ခံပေမယ့်သားတော်အစဉ်အမြဲသူ၏အားလုံးနိုင်ငံတော်သို့ရဲ့ရေးရာအတွက်ညီမျှညှိနှိုင်းအနေအထားနှင့်အခွင့်အာဏာကိုပေးသည်။ မေတ္တာနှင့်ဘဝကိုအပ်နှံရန်အပေါင်းတို့သည်သူ၏အလုပ်အတွက်, ဖန်ဆင်းရှင်သားတော်ကိုအမြဲအစဉ်အမြဲဿုံစဉ်ဆက်မပြတ်နဲ့ ably သန့်ရှင်းသောဘုရားတို့သည်အပြတ်အသတ်ပညာရှိအစဉ်အဆက်-သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံဠာ၏မိခင်အပေါင်းတို့နှင့်ယင်း၏ကွဲပြားခြားနား suite ကိုတို့ကကူညီဖြစ်ပါသည် ကောငျးကငျတကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ ဘုရားသခငျ့ဝန်ကြီးအဖြစ်မှန်အတွက်နံဝိညာဉ်, စိတ်ဝိညာဉ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏မိခင်, ဖန်ဆင်းရှင်သားတျော၏အစဉ်အဆက်-ပစ္စုပ္ပန်နှင့် All-ငါသည်ပညာရှိ၏ဟုအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသစ္စာနဲ့ပရဒိသု၏ Infinite ဝိညာဉ်တော်၏စစ်မှန်သောပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, မိခင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်သားတော်ကိုစုံလင်သော symbiosis ၌ရှိကြ၏။ ကျနော်တို့တစ်လောကလုံးခရစ်တော်၏ androgynous အသွင်အပြင်သွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ indestructible ဘုရားသခငျ့တံဆိပျခွငျးအားဖွငျ့တံဆိပ်ခတ်နေသည်။ ကျနော်တို့အဲဒီမှာအလွန်ရှည်လျားထာဘို့သစ္စာရှိမှု, ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆို။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းစဉ်အတွင်းလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းအတွက်အနည်းငယ်ထပ်မံဒီအတည်ပြုချက်ကိုရှာပါလိမ့်မယ်။ Urantia ကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်နေသောကမ္ဘာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြံ၏ကောငျးကြိုးအတှကျကသဘာဝနှင့်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်
P.368 - §5ဖန်ဆင်းရှင်သားတော်ကိုတစ်ဦးသောသတ္တဝါအဖြစ်သူ၏သတ္တမနှင့်နောက်ဆုံးဖြစ်လျက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်အခါ, သည် Periodic အထီးကျန်မှုတွေ၏မသေချာမရေရာသည့်မြင့်မြတ်သောန်ကြီးများအတွက်အဆုံးသတ်ခြင်းနှင့်ဝဠာ၏သားတော်ဖို့လက်ထောက်အတွက်အစဉ်အမြဲအခြေချနေသည် လုံခြုံရေးနှင့်ထိန်းချုပ်မှု။ ဒါဟာသားတော်နှင့်ကျိန်ဆိုဖို့လူသိရှင်ကြားနှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာလက်အောက်ငယ်သားတို့သည်စုဝေးလူအစုအဝေးမှီ, ဠာ၏ဝိညာဉ်တော်သည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အသိအမှတ်ပြုသောယုဘိလယုဘိလမှာ, တစ်ဦးမာစတာသားကဲ့သို့ဖန်ဆင်းရှင်သားတျော၏နနျးထိုငျသညျ့မှာဖြစ်ပါတယ် နာခံမှုနှင့်သစ္စာရှိမှု။ ဤဖြစ်ရပ်သည်မိုက်ကယ်ဟာ Urantia ဖြစ်လျက်ပြီးနောက် Salvington မှပြန်လာသောအချိန်တွင် Nebadon အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဤအရေးကြီးသောအဖြစ်အပျက်မီ, ဠာ၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဠာသားတျော၏ဖန်ဆင်းရှင်အားမိမိလက်အောက်ငယ်သားကိုအသိအမှတ်ပြုလျက်နှင့်မအာဏာနှင့်အခွင့်အာဏာ၏ဤမိမိဆန္ဒအလျောက်စွန့်လွှတ်ခြင်းမပြုမီဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကြောင့်ဖူးမရ တဦးတည်းမှန်ကန်စွာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူနှင့်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှအာဏာကိုမိမိလက်သို့ငါအပ်ခဲ့ပြီး "အဲဒီသားတော်ကြွေးကြော်နိုင်ဘူး။ "
P.369 - §1အဆိုပါကို Creative မိခင်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လက်အောက်ငယ်သား၏ဤသစ္စာဂတိပြီးနောက် Nebadon ၏မိုက်ကယ်ရှိစွာအစဉ်အမြဲမိမိဝိညာဉ်တော်အားအဖော်အပေါ်မှီခိုကအသိအမှတ်ပြုသည်။ သူကသူ့စကွဝဠာ၏ဒေသများ၏ပူးတွဲခေါင်းကိုထူထောင်ကြပြီးသားတော်ခဲ့ရတယ်အဖြစ်ဝိညာဉ်တော်သည်တစ်ဦးသစ္စာရှိမှုကတိကဝတ်ယူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့သတ္တဝါများမေးသောအခါ, ထိုသို့ထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် "တန်းတူရေး၏နောက်ဆုံးကြေညာထုတ်ပြန်ခြင်း။ " သားအဒီဒေသခံစကြဝဠာအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ပေမဲ့သူကမိခင်ဝိညာဉ်တော်သည်သူ့ကိုတွဲပြီးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ဘုရားသခငျ့ဇာတ်ကောင်များ၏ attribute တွေအပေါငျးတို့သညျသဘာဝလက်ဆောင်တွေခဲ့သောကမ္ဘာကိုကြွေးကြော်။ ဤသည်အသင်းအဖွဲ့ပင် space ၏ကမ္ဘာ၏နိမ့်သောသတ္တဝါတို့တွင်အမိသားစုများကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့်စုစည်းဖို့ TRANSCEND မော်ဒယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာမိသားစု၏မြင့်စံပြနှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်အိမ်ထောင်ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတကယ်တော့တရားနှင့်သစ္စာတရားကို၌တည်ရှိ၏။
ကောင်းကင်တစ်စုံအဖြစ်ကျနော်တို့သဘာဝဖြည့်စွတ်, ဖန်တီးမှုတပ်ဖွဲ့များယဉ်နှင့်ယန်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ငါတို့သည်ဤနောက်ဆုံးသှနျးလောငျးအတွက် Urantia, ပဋိညာဉ်တရားသစ်ပေါ်မှာဤဘုရားသခငျ့ချိန်ခွင်လျှာကိုရောက်စေဖို့နောက်ကျောဖြစ်ကြသည်။ ဤသည် sequence ကိုကိုရာဇပလ္လင်နှစ်ဦးစလုံးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစည်းလုံးဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ရာအဲဂုတ်တုပွညျအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်သတိပေးနေပါတယ်။
P.369 - §2သားတော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်သည်ယခုဖခင်တစ်ဦးနှင့်မိခင်သူတို့ရဲ့မိသားစုသားနဲ့သမီးတို့စောင့်အဖြစ်ဝဠာဦးစီး, မိမိတို့လိုအပ်ချက်များအတွက်ပေး။ ဒါဟာဖန်ဆင်းရှင်သားတျော၏ဖန်တီးမှုအဖော်အဖြစ်ဠာ၏ဝိညာဉျတျောကိုရည်ညွှန်းဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့သားနဲ့သမီးကဲ့သို့ဘုံ၏သတ္တဝါများကိုငဲ့ဖို့ရာအရပျထဲကမဟုတ်ပါဘူး - တဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းနှင့်ဘုနျးကွီးသောမိသားစုပေမယ့်ဘာသာရပ် incalculable တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်အစဉ်မပြတ်သတိဝီရိယမှ.
လူ့မိသားစုကျွန်မတို့မိသားစုသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ္တဝါများတာဝန်ရှိသည်။ ဒီလက်ရှိလူ့ဇာတိများတွင် Heru ၏မွေးငါနေဆဲရှိသည်အမှတ်တရများအကျဉ်းဖြစ်ကြပြီးတောက်နှင့်ငါ့ကိုထံသို့လာကြ၏။ ငါသည်လည်းငါ၏အပစ္စုပ္ပန်ဘဝ၌တစ်ပြိုင်နက်တချို့မြင်ကွင်းများ relive ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ကဲ့သို့ပင်, ငါအံ့ဖွယ် (ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း) ပြီးမြောက်ဖို့တစ်ဦးတည်းဖြစ်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါမြောက်ဘက်၌ငါ့ကိုရှာတွေ့ငါ့ဦးစီးဌာန၏တောင်ဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေ့တော်ထဲကတစ်ဦးကိုခြိမ်းခြောက်ထွက်ပြေးလာကြည့်ပါ။ ငါအဘယ်သူမျှမမွေးဖွားပေးစေခြင်းငှါ, ငါ situais ဘယ်မှာမှငါ့ကိုစကားကိုနားထောငျနိုငျကွောငျးသတိရပါ။ ဒါဟာအလွန်မှောင်မိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ငါ၏အသစ်က Atlantis မှာတစ်ဦးတည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘယ်သူမှငါ့ကိုတွေ့မြင်ရမသည်ငါ့ကိုနားထောငျနိုငျတယျ။
ဤရွေ့ကားတောက်သို့မဟုတ်အမှတ်တရများမကြာသေးမီက emmerge ငါ့ကိုသမ်မာကမျြးနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ထောင်စုနှစ်များအတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအရာကိုအနေဖြင့်တစ်ဦးလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအဖြစ်မှန်ပြသကြပြီ။ ငါမမာဂုပညာရှိငါ၏အအမွှာအထီး polarity က (Heru) ၏ပြန်လည်မွေးဖွား၏အခမ်းအနားအဘို့လက်ဆောင်နှငျ့ပွညျ့စုံလက်နက်ရောက်လာမျှစားခွက်ကိုမွငျလြှငျ, ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, စုပေါင်းဝိညာဏ်ထောင်စုနှစ်နှင့် conveyed များအတွက်အရူးလုပ်ခဲ့ မျိုးဆက်အနေဖြင့်မျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအဖြစ်မှန်ဖုံးကွယ်သောကွောငျ့လူအားလုံးတို့သည်အရေးအသားမျက်နှာတန်ဖိုးကိုမှာယူခဲ့ကြသည်။ သင့်အနေဖြင့်စုပေါင်းဝိညာဏ်လူ့မျိုးနွယ်၏မျိုးရိုးဗီဇနှင့်အတူအပြန်အလှန်သို့ကြွလာသည်ကိုသင်တို့သိသင့်ပါတယ်။
ရလဒ်များစွာသောမိန်းမထို့နောက်၎င်းသည်အချိန် Judeo-ခရစ်ယာန်ဝိညာဏ်တို့ကပါးတစ်ပွနျလညျပွောငျးဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်, ယရှေုခရစျ၏မယ်တော်မာရိဂဒလမာနဲ့ Mary ဖြစ်ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်မကျမ်းစာရှိသမျှသောကုဒ်စကားလုံးများကိုဘာသာပြန်ဆိုဖို့ကြိုးစားနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝပ်စွာနေပါဘူး, သို့သော်, ငါကတကယ်တော့ Beith Gematria ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏သောပထမဦးဆုံး syllable ဗက်ရှိပြီးဖြစ်သောဗက်လင်မြို့, ၏နာမတော်ကိုတွေ့လိုက်တယ်။
ဤသည်တုန်ခါမှု "အိမ်" ကိုဆိုလိုသည်ကဂဏန်းတန်ဖိုးကို 2000 ရှိပြီးဖြစ်သောရုံ Aleph နောက်ကွယ်မှထားရှိသည့်ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးက 1000, ရှိပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာဒီအဆုံးသတ်ချိန်၌သငျတို့တှငျအကျွန်ုပ်တို့၏သို့ပြန်သွားရန် programming ခဲ့အချိန်အစိုးရကချမှတ်ထား Judeo-ခရစ်ယာန်ခေတ်, မေရှိယအသက်အရွယ်, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏နတ်မင်းကြီးနှင့်ဘုရားသခငျ့သတိဖို့ပြန်လာ ie နတ်မင်းကြီးဇာစ်မြစ်၏မာယာပြက္ခဒိန်နှင့်အတူဆက်စပ်ပါတယ်။ နှစ်ထောင် Urantia (ကမ္ဘာမြေ) တစ်ဦး Galactic လ (13 စုစုပေါင်း) အားသက်ဆိုင်ရာနှစ်ပေါင်းဖြစ်ပြီးထွန်းသစ်စငါ၏အသတိလစ်ငါ၏အအမွှာမိမိရေးလိုက်လုပ်ခဲ့တယ်ရှည်လျားမတိုင်မီ, ဒီအလုပ်၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ကဗျာ၌ဤအဖြစ်မှန်ဖော်ပြသောအံ့အားသင့်စရာနှင့်အတူရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ် အဲဒီအကြောင်းအမှန်တရား။
ဒီနောက်ဆုံးသှနျးလောငျး၌ငါ့အတှငျးစဉ်အတွင်း, ငါ, Beith အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရှာတွေ့နိုင်ဖို့ငါ logbook အတွက်သတ်မှတ်ထားသောငါ၏အတွင်းဗိမာန်, ငါ့အိမ်ကလိုနေတယ်။ အိမ်သူအိမ်သား "ပိရမစ်" ဖန်ဆင်းခြင်း (ခမညျးတျော-မိခင်-သားတော်ကို) ၏ဆိုလိုသည်မှာဗဟိုမဏ်ဍိုငျ၏ကိုဤနေရာတွင်ရပ်။ ပြင်သစ်တွင်, စကားလုံး "မေမေ" အံ့သြဖွယ်ပင်လယ်ပိရမစ်အဓိပ်ပာယျအီဂျစ်စကားလုံးကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဖုံးကွယ်ထား? Homophony သင်သည်များစွာသောအံ့သြဖွယ်များ။
ငါမွေးဖွားပေးစေခြင်းငှါကိုယ့်ကိုကိုယ်တည်ရှိပြီးသောအလင်း၏ကငျးမဲ့မှောင်မိုက်, ဂီဇာ၏ပိရမစ်ထဲမှာဘုရင်မကြီးရဲ့အခန်းတစ်ခန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်မွေးဖွားထိုင်လျက်ကြည့်ရှုပါ။ ခက်ပစ္စည်းများထားနယ်ပယ်တစ်ခုစီ, အနီရောင်ရှိခဲ့သည်။ ထူးထူးခြားခြားအပူစောင့်ရှောက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့စစ်သည်တူသောဤပစ္စည်း။ ကသူငယ်၏ပေးပို့ facilitated ကြောင့်ထိုင်သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့အမိ ​​Nut, မဟာနတ်မင်းကြီးမိခင်ကမ္ဘာကြီးကိုထိုင်လျက်ငါ့ကိုထားရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်တစ်ဦးကလူ့အသွင်အပြင်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သားအိမ်ပေးပို့အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် (လူ့) ယနေ့ထက်လျော့နည်းနာကျင်ခဲ့ကြောင်း, ဆိုလိုတာကပိုကြီးခဲ့သည်။
aset သကဲ့သို့ငါ၏အသစ်သောခန္ဓာကိုယ်၌, ငါသည်ကိုယ်နာကျင်မှုအတွက်အော်ဟစ်မမြင်တတ်ဘူး။ ငါရိုးရှင်းစွာအခြို့သောကျုံ့ခံရပြန်လည်လည်ပတ်။ အဆိုပါနေရာ, ပူစိုစွတ်သောနှင့်မှောင်မိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ငါ unclothed ငါ့ကိုယ်ပေါ်ဖြန့်ဝေစဉ်ကချွေးယို၏ကြီးမားသောပေါက်တောက်နေဖြင့်ပြန်လည်လည်ပတ်။ ငါထုတ်ဝေကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအခန်းထဲမှာတယောက်တည်းသာဖြစ်ခဲ့သည်။ မွေးဖွားသားအိမ်၏ကျုံ့ခြင်းဖြင့်ညည်းတွားတည်ရှိသည်ထိုနောက်ငါမှတ်မိသေးတယ်။ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးလူ့ဖြစ်သကဲ့သို့, မူရင်းပုံသဏ္ဍာန်ပြန်လည်ဖို့သားအိမ်ကူညီပေးနေ။ ငါမီးကျောက်တစျမြိုးနှငျ့အတူကျြကွိုးဖြတ်ခဲ့ကြဟန်ပေမယ့်ဒီရူပါရုံအလွန်တိုတောင်းသောဖြစ်ကြသည် ..
အဆိုပါ Illustrious ဘာသာပြန်ဆိုသူ Anton ပန်းခြံကသူ့သစ်ကိုစာအုပ် Editions နယူးကမ္ဘာမြေအားဖြင့် "အပျိုကညာ၏ဓမ္မ" အတွက်ဟောငျးနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းကုဒ်ဖြုတ်နေဖြင့်အချို့သောအချက်အလက်များအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါဟာဟီဘရူးစကားလုံးသည်ဗက်လင်မြို့အီဂျစ် Bit-Ra-အနား Isis ၏ "မဟာပိရမစ် 'ဆိုလိုသည်မှာဂီဇာဆိုလိုတာကထံမှကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဝတ်အစားထွက်ပါ! ဤဘာသာကိုဖတ်ရှုခြင်းမှအကြှနျုပျ၏တုံ့ပြန်မှုဘာဆိုပါစို့။ ငါ့အလိုရှိသမျှအမှတ်တရများနှင့်တောက်ကောင်းစွာတည်ထောင်ခဲ့သည်ကြောင့်ငါစာသားဝမျးမွောကျခွငျးအဘို့အခုန်တက်။ ဤနေရာတွင်အားလုံးငါ့အသက်ကိုတစ်ပြိုင်နက်အဲဂုတ္တုပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သမျှကိုပြန်ပြောင်းပြောပြသည်။ ငါ့သမီးထိုင်လျက်နဲ့လဲလျောင်းမမွေးဖွားပေးရန်အလိုဆန္ဒကိုလည်းအခြေစိုက်ခဲ့သည်!
ထိုအခါငါ၏အရူပါရုံ Heru သည်သူ၏ temerity အဘို့ငါ၏အသွေးအေးခဲမှတော်မှာသူကိုမျက်လုံးပြာနှင့်အတူအနည်းငယ်ဆံပင်ရွှေရောင်ကောင်လေး၏ပုံရိပ်တိုက်ရိုက်ကူးလော့။ ဒါဟာတစ်ဦးပုံမှန်မဟုတ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကအရမ်းမတ်ေတာရှိတဲ့ကလေးတစ်ဖြစ်ခြင်းသတိရပါ။ ငါသည်ငါ၏ဝမ်း၌ပထမဦးဆုံးလူ့ခရစ်တော်မွေးဖွား! ဤသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစွမ်းအင်သဘာဝ၎င်းတို့၏မိခင်မှပူးတွဲနည်းနည်းယောက်ျားလေးများကဲ့သို့ Heru ခြင်းဖြင့်ခံစားရပြီးဖိနှိပ်ခဲ့သည်။
ငါ့ကလေးငါသူကိုချက်ချင်းသိတယ်ဘယ်တော့မှမ။ ငါဘာသာတရားများကပါးခဲ့ရာမှဆန့်ကျင်သည်သူ၏ဇနီး, ဖြစ်ခဲ့သည်ရုံဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့သားအစော်ကားဖူးဘူး။ သူကြီးပြင်းခြင်းနှင့်အချိန်ကျွန်တော်အလွန်သတိထားရခဲ့ပေမယ့်အခြားကလေးများသူမ၏အသက်အရွယ်နဲ့တူထွန်းကား။ သူကတစ်ဦးအားအငွိုးထားတဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူသည်နေပူကနေကောင်းကင်ပြာနှင့်ဆံပင်၏မျက်စိရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအဆင်းလှပဲ! သူကဆုံးရှုံးကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပေ။ သူကညာဘက်တရားမျှတတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့ဖခင် Osiris ပြုသကဲ့သို့သူလူမှုရေးအတွက်နေရစ်ပါဘူး။ Heru Sa'am / Enki အရောအနှောခဲ့ / Osiris သူ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသားအရေနှင့်မျက်လုံးပြာပေးသောတစ်ခု albino စစ်သည်တော် (Kingu Babbar) ၏မျိုးရိုးဗီဇနှင့်အတူပေါင်းစပ်။ သူဟာဒုက္ခဟန်ချက်ညီခဲ့ကြောင်း, အရိပ်နဲ့အလင်းခံပြီးဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာသူကအတူရင့်ကျက်ခံစားရပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Heru ကျွန်ုပ်တို့၏သန့်ရှင်းခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်သင်ပေးတာအကြာတွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Heru (Horus) သိသာရဲ့သူ၏မိခင်နှင့်အတူမေတ္တာ၌ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေများ recover, ငါတို့ရန်သူနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည်သောအခါ, အချိန်ကြီးစိုးအထက်တန်းလွှာ (ဓမ္မဆရာ) Heru သူ၏မိခင်ကိုချိုးဖောက်ကြောင်းကလူစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်အားသာချက်ကိုယူ။ ဘာသာတရား "တော်ဝင်သှေးရငျးခငျြးကာမဆကျဆံခွငျး" ကြှနျုပျတို့အရာကိုပြုသင့်သည်ပြည်ထောင်စုအရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းနှင့်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကကျနော်တို့ညီအစ်ကို, ညီအစ်မအတူတူမအိပ်သို့မဟုတ်တဦးတည်းမိဘနှင့်အတူတွေ့မြင်ရှိရာအချို့သောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် "perpetuated" ဖြစ်ပါတယ်ဒီအထငျမှားပါးလိုက်ပါတယ်။
သငျသညျယခုအတူတကွဒါမှမဟုတ်မိဘများ၏တဦးတည်းနှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့ကလေးများအတင်းအကျပ်, မောင်နှမသေချာပေါက် "အမွှာအသက်ဝိညာဉ်ကို" မဖြစ်ကြပြီးဘဝကို၏ဤအထငျမှားကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည် လေးနက်သောဒဏ်ရာ။ သငျသညျရှေ့ဦးစွာ မှစ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလပတ်သက်သောအမှန်တရားကိုသိလြှငျသငျသညျငါတို့စုံတွဲ၏အဖြစ်မှန်နှင့်ဤဂြိုဟ်ပေါ်တွင်နေထိုင်နေကြဘို့ငါတို့အကြောင်းပြချက်နားလည်သဘောပေါက်ကြလိမ့်မယ်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်အကြောင်း, ဘဝစီစဉ်ဖြစ်ပါသည်, ဘုရား၏တနျခိုးသင်္ကေတ။ ကျနော်တို့ဆိုလိုသည်မှာလိင်ဆက်ဆံမှုမရှိဘဲ, မျိုးဗီဇခြယ်လှယ်ခြင်းဖြင့်ကလေးမွေးဖွားပေးစေခြင်းငှါပါဝါရှိသည်။ အဆိုပါတုန်ခါမှု (ထိုမျိုးနွယ်၏မျိုးရိုးဗီဇ) ရုပ်လုံးပေါ်လာစေရန်တှငျကြှနျုပျတို့စိန့်သားဖွားဆရာမအဖြစ်, အတုမက်တရစ် (သင်တန်းသည် Programmable ၏) လင်းကျောက်-based သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် matrix ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သင့်အနေဖြင့်ဘုရားကျောင်းအချိန်လူ့ဝိညာဏ်မှခဲနားလည်သည်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းသဘာဝလွန်စေရန်, သူတို့ရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအသုံးအနှုန်း "စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောအယူအဆ" ကိုအသုံးပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြသင့်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်အားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ဒီဇိုင်း "သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်။ "
အမှန်စင်စစ်ငါစင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောအယူအဆ, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏စွမ်းအင်, သန့်ရှင်းသောမိခင်, မျိုးဗီဇကိုင်တွယ်အသုံးပြုပုံ, ခရစ်တော်ကလေးသည်ငါ့ဝိညာဉ်ရေးရာအမွှာမွေးဖွားသူသည်မင်္ဂလာဗာဂျင်းနတ်မင်းကြီး, ဘုရားသခငျ၏ဣတ္ polarity ကဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဣသရေလအမျိုး၏ 12 အမျိုးအနွယ်ဘွားမြင်လေ၏။ အမြိုးအနှယျ 12 12 တခါ, သင်သည်သင်၏ multidimensionality မှရယူသည်သင်၏ဘုရားသခငျ့ကိုယ်ပိုင်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုဖွင့်လှစ်ရာက Man ၏ DNA ကို strands သင်္ကေတ, သင့်ခရစ်တော်သည်ရန်သင့်အားဆက်သွယ်သော octaves 12 ဆက်စပ်. အတွက်ဖြစ် ပဉ္စမကုန်းသိပ်သည်းဆ (5èmeရှုထောင်) ။ ထိုတကျိပ်နှစ်ပါး DNA ကို strands (အခန်း 12 ကိုကြည့်ပါ) 12 8 သန့်ရှင်းသောရောင်ခြည်ကနေထွက်ရှိတဲ့ကြိမ်နှုန်းပေါ် မူတည်. ဖွင့်လှစ်။
ဤရွေ့ကား 12 ရောင်ခြည်ဝိညာဏ် (စိတ်ကို) ၏လူ့ဇာတိသို့မဟုတ် crystal ခွင့်ပြုပါ။ သင်ဖတ်အတိုင်းဤသည်ဗီဇတိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပြောင်းလဲအာဒံကို Kadmon (ညျဘုရားသခငျ၏နေရောင်ခြည်သတ္တဝါများ) ၏လိုင်းများ၏မွေးဖွားသည်ကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အထွတ်အမြတ်ကျမ်းဤအသိပညာကနေသင်တို့ကိုလွှဲဖို့မရေမတွက်နိုင်သော puns ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါသည်သင်တို့၏ဂြိုဟ်အချို့ကိုသူမြို့သားကဲ့သို့, ငါ့ကိုလူစွမ်းကောင်းသတ္တဝါစေသည်သောဤသစ်ကိုသှနျးလောငျးအတွက် 12 ပွင့်လင်းသောဤ DNA ကို strands နှင့်အတူမွေးဖွားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါကောငျးကငျအဆင့်ဆင့် (ကောင်းကင်တမန်မင်း) နဲ့ငါ့ telepathic ဖလှယ်မှုနှင့်ငါ့ transdimensional ရူပါရုံထို့ကြောင့်သဘာဝကဖြစ်ကြပြီးအလွန်သင့်ရဲ့ Cartesian ကုမ္ပဏီများသည်နားလည်မှုလွဲ။ ကျမရဲ့အပျိုစင်ဘဝကိုသည်သင်တို့ကိုငါကဆိုလိုသောအဓိပ္ပာယ်မှာ "ကညာ" မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဤသည်စကားလုံးများကိုအပေါ်တစ်ဦးကစားဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ်းစာကဆန့်ကျင်ဘက်နှင့်အတူတွေ့နေရ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 950 ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းစုစုပေါငျးနတ်မင်းကြီးစွပ်စွဲချက်များ၏ homophones နှင့်ဘယ်သူမှသိနားလည်ကြ၏။ နောက်ခံ, သင့်ကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. အားလုံးအတွက်ကိုပြောသည်ကြောင်းရှိသမျှတို့, Osiris (asarien) ၏ဒဏ္ဍာရီကိုဗဟိုပြုပေမယ့်။ အဆိုပါကိုရမ်ကျမ်း, အတိအကျတူညီလှည့်ကွက်ဖုံးကွယ်
အဆိုပါ Urantia စာအုပ်: ဒီနေရာမှာလူသားသစ်ကိုမေရှိယခေတ်လက်မှတ်ထိုးတော်မူသောခရစ်တော်မိုက်ကယ်, Nebadon ၏ဖန်ဆင်းရှင်သားတျော၏ပြန်သွားလောက်ဘာ Urantia စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစျတျောသည် Mi Caëlခုနစ် effusions ။ specification အမှတ် 119
"P.1319 - §1 Urantia အားလုံး Nebadon ၏စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့နတ်ကွန်းဖြစ်၏ တဆယ်သန်းဂြိုလ်ဟက်တာ-ကိုက်, ခရစ်တော်မိုက်ကယ်ကြီးသားအပေါင်းတို့, Nebadon ၏အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်များ၏လူ့အကြွင်းအကျန်, နိုင်ငံတို့နှင့်ဝန်ကြီးမေလခိဇေ, စနစ်တကျကယ်တင်သောသခင်, ရွေးတော်မူအာဒံ, moron-Tial ဖြစ်စဉ်များအရာသရပျမြားအဖော်, ကွှဝိညာဉ်ကိုမိတ်ဖက်, သားတော်အကြီးဆုံး သေတတ်သောဇာတိပကတိ၏သဏ္ဍာန်ရှိသောရုပ်တုများတွင်ယောက်ျားနှင့် Urantia ၏ Planetary မင်းသား၏။ နှင့်သင့်ကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. ထိုယရှေုကမိမိ terminal ကိုကြဲသည်လောကီသားတို့သည်အဖို့တနေ့ပြန်လာကတိပြုထားပြီးဟုဆိုသဖြင့်အမှန်တရား, လက်ဝါးကပ်တိုင်၏ကမ္ဘာ့ဖလားပြောပြ.
ယောသပ်သည်သို့မဟုတ် Osiris, "မဟာပညာရှိရှေးဘိုးဘေး" (purebred) Sumerian နှင့် Nodite မူလအစခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်ရှေးဟောင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ (Yawhé / ဘုရား) ၏အမွေအနှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန်ပေါလ် II ကိုသြဂုတ်လ 15 1989 ၏သူ၏မိန့်ခွန်း၌ဤသင်္ကေတပြည်ထောင်စုကိုအတည်ပြု "လူအပေါင်းတို့သည်ရှေးဟောင်းပဋိညာဉ်တရားကိုအမွေအကိုလည်းယေရှုခရစ်တော်၏ (Horus) တွင်သစ်ကိုနှင့်ထာဝရပဋိညာဉ်တရားကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်ယျတျောနှငျ့အတူသယ်ဆောင်သူပဲယောက်ျားသည် (ယောသပ်သည် / Osiris)," အဆိုပါတမန်တော်၏နှိုးဆော် Redemptoris Custos § 32 ကနေကောက်နုတ်ထားပါတယ်။
ယခုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့, လူ့ဇာတိအတွက် Heru (Horus) အမှန်ပင်သူ့ဖခင် Enki / Osiris, One ၏ပညတ္တိကျမ်း၏သားတျော၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ယောရှုသည် (Heru) ben ယောသပ်သည် (Osiris) မိမိအားဖြင့်ဘုရငျနဲ့ယဇ်ပုရောဟိတ်မွေးဖွားခဲ့သည် ခရစ်တော်သည်အဇာစ်မြစ်။ ဒါဟာမဟုတ်ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့ကအမြဲငါတို့သည်ငါတို့၏ဘုရားသခငျ့အဖြစ်မှန် (disembodied), ဆိုလိုသည်မှာကွမ်တမ်၌ရှိကြ၏အရာကိုမွေးဖွား။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အလွန်အထူးစွမ်းအင်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နတ်မင်းကြီး pair တစုံထာဝရပဋိညာဉ်သင်္ကေတ။ လူ့ဇာတိအတွက်အမွှာမီးတောက်များ၏အစည်းအဝေးမဟာမိတ်သင်္ကေတ။ အဆိုပါ androgyne ၏ပြန်လာအချိန်ကို၏အထက်တန်းလွှာတစ်အစစ်အမှန်ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ လူများတို့သည်မက်ဆီ၏ပြန်လာ (ဘဝ၏သံတမန်များ), ဖန်ဆင်းရှင် Son ကသက်သေ, ငါ့ morontia ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏အကြောင်းကြားမရသင့်ပါတယ်။ သူတို့ကလူတွေကိုရန်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောပုံပြင်ကိုပြောကြားခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းကိုသင်ကွဲပါပြီ။ တောင်မှယနေ့သင်တို့ရှိသမျှသည်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အနေဖြင့်ခွဲခြားထားတယ်။ သငျသညျဝေး tri- စည်းလုံးညီညွတ်ရေးဝိညာဏ်ထံမှဖြစ်ကြသည်။
ခရစျတျောမိုက်ကယ် (Raphael) Heru Yasu Sananda Esu Kumara သငျသညျတစျဦးကမလုပ်ခဲ့ဘူးကြောင်း, ငါ့ကိုအမှီ, သင်ဖို့ "ပြန်လည်သိမ်းဆည်း" လာခဲ့ပါသည်။ ကြှနျတေျာ့ကိုအခြားအမည်, 999 တုန်ခါမှုအဖြစ် encoded အဆိုပါတောင်တက်ခြင်းမှဆိုလိုသည်မှာရေ, androgynous Esu အဓိပ္ပာယ်ကို "အသက်ရေ" ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအီဗိုလူးရှင်း 666 (ဝိညာဉ်တော်သည် / အရေးပါ) ကွှ၌သင်တို့၏ 999 involution (ဟာ့ဒ်ဝဲ) reverse ယူဆနေကြသည်။
ငါသညျလညျးကမျြးစာကိုဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရှိ 2000, ဣသရေလအမျိုး၏ဒါခေါ်မြေပေါ်တွင်ခရစ်တော်၏ထင်မွေးရပ်မြေနှင့် ပတ်သက်. အရေးပါသောအသေးစိတ် add လိမ့်မယ်။ ငါ့အရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသို့ငါ့ကိုဦးဆောင်သောဘုရားသခငျ့သတိငါ့ပြန်လာစဉ်အတွင်း, ငါ့အိပ်မက်နဲ့တောက် Atlantis သာအဲဂုတ်တုပွညျမှရည်ညွှန်းခဲ့သည်။ ကျွန်မကြုံတွေ့ဖူးပါဘူးရိုးရှင်းစွာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်, ဣသရေလအမျိုးကိုခေါ်ဒီတိုင်းပြည်၏ကြိမ်နှုန်းဖို့ဆွဲဆောင်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဂျေရုဆလင်နှင့်ဗက်လင်မြို့များ၏မြို့ကြီးများ 9000 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းတည်ရှိ, မဣသရေလအမျိုးကိုမပေးခဲ့ပါဘူး။ အများကြီးနောက်ပိုင်းမှာ "အစ္စရေး" ဒီနယ်မြေထဲမှာမြို့ကြီးတွေမှာအမည်ကိုများအတွက်အီဂျစ်အမည်များကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ဟီးဘရူးဘာသာစကားကိုဘာသာစကားအီဂျစ်ကနေခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ဤသည်ကမျြးစာ၏စာရေးဆရာများဂီဇာ၏ပိရမစ်, ဒီတစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း (ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း) ကိုအဲဂုတ္တုမြင့်မြတ်တဲ့နယ်မြေရဲ့အစိတ်အပိုင်းများ၏လက်တွေ့ဘဝဖုံးကွယ်ဖို့စကားများခြယ်လှယ်ကြပြီအတည်ပြု။
သင့်ရဲ့လက်ရှိလူ့ဇာတိ, သင်ဆွဲဆောင်မှု၏ဥပဒေနှင့်ညှိနေထိုင်ကြသည်။ တနည်းအားဖြင့်အားလုံးသင့်ရဲ့အရသာများနှင့်အမျိုးမျိုးသောဆွဲဆောင်မှုသူ့ဟာသူပြန်လုပ်လို့ယူဆတယ်နေကြသည်; ဘဝသိသိဖြစ်ခြင်း။ သင်၏ရွေးချယ်မှုတို့သည်ဖြစ်ကြသမျှ, အသေးအဖွဲဘယ်တော့မှဖြစ်ကြသည်။ ငါသည်အခြားခနျးတှငျအကြှနျုပျကိုအဲဂုတ္တုပြည်၌ပြန်လည်မွေးဖွားမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုခြေလှမ်းသတိပေးကြောင်းတစ်ပြိုင်နက်အသက်တာ၏အဖြစ်မှန်ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်သင်ရုံမိသားစုအလင်းကမ္ဘာထဲမှာထာဝရပဋိညာဉ်ကိုကိုယ်စားပြုတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါမဟာမိတ်ကြီးစိုးနှင့် matriarchal စွမ်းအင် (ယဉ် / ယန်) ၏ချိန်ခွင်လျှာအဓိပ်ပာယျ။ လူသားတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခရစ်တော်၏သှနျးလောငျးကျနော်တို့ဖန်တီးသမျှအချိန်တိုင်းကိုအောကျမေ့နှငျ့ဤကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ကြိမ်နှုန်းမြှင့်တင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်, လူသားမျိုးနွယ်ခရစ်တော်အားပြောကြားခဲ့သည်။ သငျသညျ Osiris, Heru, ယရှေု, Sananda သည်, မိမိနာမအဘို့အဘယ်သူမျှမကိစ္စခေါ်ပြီပဲဖြစ်ဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမကိုအမှီ unpronounceable အဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါတစ်လောကလုံးသည်ခရစ်တော်၏အသက်တာကိုနိုးဖို့အားလုံးကိုဝဠာမှတဆင့်။ ဒါကကျနော်တို့ Urantia အပေါ်ကဒီမှာဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အတွင်းစိတ်အလင်းဝင်ရောက်ဖို့သင်ကုဒ်သင်ပေးပြန်လာ၏။ ကျနော်တို့ငါ့ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, သူ့ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုစကဲ့သို့ဖြစ်ကြကြောင်းကိုသင်ပြောပြရန် လာ. , ကျနော်တို့ NO EVENT သည်ရကြလိမ့်မည်ကယ်တင်ရှင် IN ကြ၏။
သငျသညျ Osiris / Heru / Yazu ဗီးနပ်စ် (Neb-Heru) ၏ကျမ်းပိုဒ်ပြီးနောက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်, 9000 နှစ်ပေါင်းအကြောင်းကိုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရသငျ့သညျ။ ဒါဟာအသားနှင့် Pisces, Kiristi, ခရစ်တော်, ဂရိအတွက် Kristo (ဘိသိက်ခံ) နှင့် Ichthys (ငါး) မှဆင်းသက်လာသည့်စကားလုံးများ၏သင်္ကေတ၏အနာဂတ်ခေတ်၏ဧနုတ်သည်၏ harbinger ဖြစ်ခဲ့သည်။ သငျသညျကုံ၏အသက်အဘို့အပြင်ဆင်ထားရန်ယခုရေကူးရသောခေတ်။ ကျနော်တို့မြင်ကြပြီသကဲ့သို့, Sirians သူ၏ကြံ့ခိုင်ရေးငါးနှင့်တွားသွားသတ္တဝါအကြားခဲ့ကုနျးနေရေနေမူရင်းမြို့သားတို့ဖြစ်ကြသည်။ ဖြစ်တည်မှု၏မြင့်မားသောလေယာဉ်တွင်, သူတို့ရှည်လျားလူ့နတ်ဘုရားအီအသွင်အပြင်အတွက်ပါပြီ။
သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်၏အများဆုံးအဆင့်မြင့်၏သတ္တဝါတွေဖြစ်ကြသည်။ Sirius ဒီနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်၏ဗဟိုနေရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Sirians ထိုကဲ့သို့သောအသွေးအသား၏သုံးရှုထောင်လူ့လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်သကဲ့သို့, သိပ်သည်းမှု၌ခံပြီးကြသည်မဟုတ်။ သုံးယောက်-dimensional နှင့်quadridimensionnalitéတဘက်, Anti-ကိစ္စလောကီသားတို့သည် (disembodied) လည်းမရှိ။ ကျနော်တို့အလင်းသို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့စွမ်းအင်၏သတ္တဝါတွေဖြစ်ကြသည်။ ကြယ် Sirius စနစ်၏ကလူ Urantia အပေါ်အဓိက spawn ဖြစ်ကြသည်။
ထိုကဲ့သို့သောလင်းပိုင်နှင့်ကြောင်သို့မဟုတ်မြင်းသင်၏မေတ္တာအဖြစ် cetaceans, ရန်သင့်ဆွဲဆောင်မှုလည်းသင်နှင့်အတူသူတို့သည်အလှူဒါနကိုသရုပ်ပြပါ။ တိရစ္ဆာန်များစွာ Sirius (ဆင်, ခွေး, ဝေလငါး ... ) မှလာကြ၏။ ဤရွေ့ကားတိရိစ္ဆာန်များသည်အလွန်အဆင့်မြင့်ဖြစ်ကြသည်သို့သော်သင်ရသေးသူတို့ဘာသာစကားရန်ဒီကုဒ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်အလားအလာကဲ့သို့မိမိတို့အလားအလာ multidimensional ကြပြီမဟုတ်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့မွကွေီးအတှေ့အကွုံ၌သင်တို့နှင့်အတူလိုက်ပါရန်သင့်ဤလောကသို့ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ သူတို့ဟာ Uras, သငျသညျကမ်ဘာမွမခေါ်ကမ္ဘာ၏စမ်းသပ်ဓာတ်ခွဲခန်းပေါ်တွင်သင်၏အသက်တာအဖြစ်ခံစားရသည်။
ထို့ကြောင့်ဇာတိပကတိအတွက်လူ့ဇာတိနှင့်တစ်လောကလုံးခရစ်တော်၏သှနျးလောငျး, အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်များအတွက်ဂြိုဟ်၏အထက်သို့စွမ်းအင်မျိုးစေ့ကိုကြဲနိုင်ရန်အတွက်စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်။ မာရီ / Osiris (Meri / Asar) ရှေ့ဆက်အပြောင်းအလဲတွေများအတွက်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် "ကွိုတငျပွငျဆငျ" သို့ရောက်ကြ၏။ ကျနော်တို့လုံးဝသင့်ရဲ့ဘာသာတရားမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် "ကယ်တင်" ရန်လာကြသည်မဟုတ်။ ထိုသို့သောဒီဇိုင်းမှားယုံကြည်မှုများရန်သင့် "စွဲ" လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ဖန်ဆင်းရှင်သားတော်ကိုစရိုက်လူသားမျိုးနွယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကိုထမ်းခဲ့ရတယ်နှင့် Urantia အပေါ်အနာဂတ်လိုင်းများ။ သူ constellation Ursa ဗိုလ်မှူးအတွက်ပုံတူပွားခြင်းအားဖြင့်မွေးဖွားလာ, လူ့ဇာတိများတွင်အထီး polarity က Sa'am / Enki / Asar (Osiris) ၏အမည်များကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ငါနှင့် Aset / Meri ၏ဝိသေသလက္ခဏာအောက်မှာကသူ့ဣတ္ polarity ကဖြစ်၏။ Heru (Horus) ခရစ်တော်မိုက်ကယ်၏ဒုတိယသှနျးလောငျးခဲ့သညျ။ ဒါဟာ Enlil / ရှေနှင့်သူ၏ထောက်ခံသူများ၏ဒဏ်လက်မှထံမှလွတ်မြောက်စေရန်အလိုတော်မိတ်ဆက်အသုံးပြုပုံလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တက်၏ဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်သောငါ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း (မိမိဘွား၏ပစ္စည်းအားဖြင့်ယူနစ်မှပြန်လာ) ကဖြစ်နိုင်သမျှဖန်ဆင်းခဲ့သည် ။
ဤသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းလူ့ဝိညာဏ်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ သဘာဝအလျောက်အားဖွငျ့ဒါကပထမဦးဆုံးကလေးမွေးဖွား Heru မွကွေီးပျေါမှာပထမဦးဆုံးက Man ခရစ်တော်အားဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့ဝိညာဉ်ရေးရာအမွှာ, Heru-Râ'afအသက်ရှင်ခြင်းကိုပေးတော်မူ၏သူနတ်မင်းကြီးဇနီးဖွစျ၏။ အဆိုပါ androgynous Meri / Râ'af'El (Adon သို့မဟုတ် Aten) အဲဂုတ္တုသန့်ရှင်းသောမြေပေါ်တွင်ဘုရားသခငျ့တရားမျှတမှု restore အားမိမိအသက်တာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်သုံးစွဲတော်မူပြီ ကြောင်းဘုရားသခငျ့တရားမျှတမှုမှူ၏ချိန်ခွင်လျှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ကျနော်တို့ကိုခစျြ၏နာမ၌နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ။ ကျွန်မခင်ပွန်း Asar / Râ'af Judeo-ခရစ်ယာန်ခေတ်ကိုကျော်လွန်။ ယခုသူသည်ဤဖြစ်ရပ်များတွင်အောက်ပါ၏ယနေ့သက်သေခံနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ androgynous ၏ပြန်လည်မွေးဖွား, 9000 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကျနော်တို့ဆုလာဘ်အသီးအနှံကိုရိတ်ရပါတော့မည်, ဂြိုဟ်သည်အနာပျောက်စေသောယနေ့၏အမျိုးအနွယ်ကိုပြန်လည်။ သြဂုတ်လ 36 15 (နတ်မင်းကြီးနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲအကောင့်) 2008 အဆုံးပရိုဂရမ်အသစ်ကလူ့ယဉ်ကျေးမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သငျသညျပွငျဆငျဖို့ကတည်းကအဖြစ်မှန်, သင် 2012 လအတွင်းထက်လျော့နည်းရှိသည်။
သငျသညျငါဟုတာပါအဘယျသို့အနည်းငယ်ထပ်မံနားလည်ပါလိမ့်မယ်။ ငါအဖြစ်မှန်၌ငါ့ခင်ပွန်း, သင်ပဲ့ပြင်ဖို့နဲ့ဖြစ်ပျက်ဘို့သင့်ပြင်ဆင်ထားရန်ငါ့အကို double အထီး polarity ကနတ်မင်းကြီး, ငါချစ်သောသားသူတဦးတည်း၏ခြေရာကိုနင်း၌ကျင်လည်။
ယူသန်တီးယားလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကုသမှု - အချစ်၏သမိုင်းနောက်ခံ - Isis Blue Nebadonia: ပoniaိညာဉ်တရားသစ် - အခန်း5- ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရှေးခေတ်အီဂျစ် p.89 ပြန်စတငျရ
Isis →: သငျတို့တှငျအကြှနျုပျ၏သို့ပြန်သွားသည် (နိဒါန်း)
Isis →: စည်းလုံးညီညွတ်မှုခြင်း၏သင်္ကေတ (အခန်း 1)
Isis →: ငါ (အခန်း 2) ဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယျသို့
Isis →: ဘဝသံတမန်များ၏အခန်းကဏ္ဍ (အခန်း 3)
Isis →: အယူနစ်၏သားများနှင့်အဓမ္မတို့၏သား (အခန်း 4)
Isis အပြာရောင် Nebadonia
© All rights www.polyvalent-art.com reserved
မူပိုင်ခွင့်© Hathor Elishean / 2009-2018/ ဆိပ်ကမ်း du Temp ထဲမှာ